Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Sarotra ny manarina ny fahantrana nandritry ny 57 taona” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : “Sarotra ny manarina ny fahantrana nandritry ny 57 taona”
Hentitra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly manoloana ireo tsikera mandeha, amin’ny filazana fa mandeha foana ny filoham-pirenena mitety an’i Madagasikara” avy any Maintirano aho dia izao indray mitsidika anareo aty Amparafaravola, ary mbola ho ao Moramanga dia Morondava ihany koa; eto aho dia milaza aminareo fa tsy maintsy mandeha foana ny filoham-pirenena n’iza ho faly n’iza ho tezitra, satria ny vahoaka malagasy no ho jerena, ary ny asa fampandrosoana no jerena” hoy ny filoha. “Sarotra ny manentsina ny lavaky ny fahantrana nandritra ny 50 taona, nefa tsy kivy isika, na maro aza ireo mpitsikera “ hoy hatrany ny filoham-pirenena malagasy. Maro tokoa ny asa vita ankehitriny, ary poforon’ny mpiasa ny bainga voavadika, ka anton’ ny fitokanana izay tanterahina. Ireo asa izay notanterahina ihany koa dia asa izay naharitra, ka izao fahavitany izao dia atolotra ho an’ny vahoaka.
Noho izany dia mpanatsatso fotsiny ihany ireo izay milaza fa mandeha foana ny filoham-pirenena ; ary dia manakivy sy manaratsy no hany lahasa izay ataon’ ny sasany. Nanamafy mihitsy aza ny filoha fa tsy maintsy tohizana ny fampandrosoana, ary tsy ho resin’ny fahakiviana ihany koa. Nanome ohatra amin’ny diany ny filoham-pirenena , dia ny fitadiavana mpamatsy vola fitadiavana hiara- hiasa hanasoavana ny vahoaka ; noho izany mitohy hatrany ny asa fampandrosoana, izay tombony ho an’ny firenena hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ankilany nandritra ny fandraisam-pitenenany, dia nanamafy ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao fa “maro ny milaza fa mandeha foana ny filoha; tsy mampaninona izany tompoko fa tohizo hatrany ny asa fampandrosoana ho an’ny vahoaka, ary izay dia aoriananao hatrany ’’ hoy ny filohan’ny senat. Mikasika ny lafin’ny fifidianana ihany koa dia nilaza ny filohan’ny Antenimieran-doholona fa ‘’ adidinao voalohany ny mijery ny fifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra, noho izany dia fifidianana demokratika no ilaina, ka aoka tsy hokorontanina ny firenena”.